Ronaldo oo guuldarro ka badbaadiyay Juventus…Xilli Milan weli ay la’dahay Guul+SAWIRRO – Gool FM
Ronaldo oo guuldarro ka badbaadiyay Juventus…Xilli Milan weli ay la’dahay Guul+SAWIRRO
CR Shariif December 26, 2018
( Serie A ) 26 Dis 2018. Cristiano Ronaldo ayaa gool uu waqti dambe dhaliyay wuxuu guuldarro ka badbaadiyay Juventus oo 10-cayaariyahan ku cayaareysay kullankii Atalanta oo kusoo idlaaday 2-2 iagoo xoojiyay rikoodhkooda guuldarro la’aanta.
Ronaldo, ayaa badal ku yimid qeybta dambe kullanka wuxuuna dhaliyay goolka dhibicda u suuragal shay Juve daqiiqadii 78-aad kasoo ahaa kubbad madax ah.
Berat Djimsiti goolka kama’ ah uu horaanta kullanka iska dhaliyay ayay hogaanka ku qabatay Juventus, ka hor inta uusan bar-bareen dhaliyaha kooxda Atalanta Duvan Zapata intaan la aadin nasiinada dheesha
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha labaad oo ay kaliya cayaarta sooctay 10-daqiiqo waxaa Bianconeri casaan ka qaatay laacibka Rodrigo Bentancur.
Waa markii u horreysay oo horyaalka talyaaniga ee Serie A la cayaarayo 26 December.
Ronaldo ayaa kullanka kusoo bilaawday keydka markii u horreysay tan iyo markii uu £99.2m ugu soo biiray bishii July, laakiin wuxuu dhaliyay goolkiisii 12 ee horyaalka kaliya 13-daqiiqo uu garoonka ku jiray xilligii uu badalka kusoo galay.
Tani waa markii labaad oo ay hogaamiyaasha horyaalka lumiyaan dhibco waxay hore bareejo ula galeen Genoa laakiin weli waa guuldarro la’aan xagaagan.
Dhinaca kale, AC Milan ayaa ku fashilmatay iney gool dhaliso kulankoodii afaraad oo xariira horyaalka Serie A markii u horreysay tan iyo bishii December 1984, iyagoo bar-baro goolal la’aana la galay kooxda kaalinta 19-aad ee Frosinone.
Liverpool oo dheereysatay Hogaanka horyaalka Xilli Guuldarro ay soo gaartay Manchester City…iyo United oo gaartay Guushii labaad oo xariira+SAWIRRO
Liverpool ayaa ku guulaysanaysa Premier League xiliciyaareed kaan (Dib u EEG taariikhda!!)